राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ? नगर्नुहोस् यस्ता गल्तीहरु …? – List Khabar
Home / समाचार / राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ? नगर्नुहोस् यस्ता गल्तीहरु …?
admin January 24, 2022 समाचार Leaveacomment 121 Views
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन आवेदनमा दैनिक कोटा प्रणाली लागू गरिएका कारण सेवाग्राहीहरु भौतिक रुपमै कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।तर भिडभाड र समय अभावका कारण कतिपय सेवाग्राहीले सही विवरण पेश नगरिकनै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएको पाइएको छ ।
Previous माघ १० गते सोमवार, यस्तो छ तपाईको भाग्य
Next खुसीको खबर ! अब ४० वर्ष कटेका पुरु”षलाई भत्ता।